မနုဿဗေဒက ဘာကိုလေ့လာတာလဲ။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 30/12/2021 10:00 | လေ့လာမှုများ
မနုဿဗေဒက ဘာကိုလေ့လာတာလဲ။ လူကို အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြပြီး အရာဝတ္ထုတစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြတဲ့ အသိပညာရဲ့ အကိုင်းအခက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မနုဿဗေဒသည် ဤအရာ၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦး၏သဘောသဘာဝ၊ ၎င်းတို့၏သဘောသဘာဝနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပေါင်းစည်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည့် စည်းကမ်းတစ်ခု။ လူသား၏တည်ရှိမှုသည် ယဉ်ကျေးမှု၊ လူအချင်းချင်းဆက်ဆံမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း သို့မဟုတ် အနုပညာစသည့် မတူညီသောအချက်များကို အလေးပေးနိုင်သည်။ လူသား၏အဖြစ်မှန်သည် လူမှုယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်မှ ကွဲပြားသောအမြင်များကို ရရှိသည်။
တစ်မူထူးခြားပြီး ထပ်တလဲလဲမရနိုင်သော လူသားတစ်ဦး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို စံများ၊ တန်ဖိုးများနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ ရှိနေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခု၏ အခြေအနေများသည် အကြောင်းအရာ၏ အတွင်းပိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သူ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မနုဿဗေဒသည် ဒဿနိကဗေဒနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသည်။ အံ့သြဖွယ်ရာနှင့် သင်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်သည် မတူညီမှုများကို လေးစားမှုမှ အမှန်တရားကို စောင့်ကြည့်ရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကနေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့ အရာတွေဟာ လူသားတွေရဲ့ အဖြစ်မှန်နဲ့ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ဖော်ပြမထားပါဘူး။
1 လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။
2 ယနေ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မနုဿဗေဒ၏ အရေးပါမှု
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။
လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လူသားတစ်ဦး၏ ပြုမူပုံတို့ကို နားလည်ခြင်းသည် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို တန်ဖိုးထားရုံသာမက အကြောင်းအရာကိုလည်း ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဤအကြောင်းများကြောင့် မနုဿဗေဒသည် လူသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အနှစ်သာရကို အလင်းပေးရုံသာမက၊ ဒါပေမယ့် သုတေသနတွင် မတူညီသော လူမှုရေးအုပ်စုများအကြောင်း အဖြေများကိုလည်း ပေးပါသည်။ နှင့်သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။
အုပ်စုတစ်ခု သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု၏အကြောင်းအရာတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်ကိုရရှိစေသော မတူညီသောကွဲပြားမှုများရှိသည်။ ဥပမာ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် သင်္ကေတများ။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနှင့် ထိတွေ့ခြင်းသည် အတွေ့အကြုံများ၊ သင်ယူမှုနှင့် အယူအဆများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းကို အားပေးသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအသုံးအနှုန်းများသည်လည်း မျိုးဆက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ကူးဆက်ကြသည်။ ပါးစပ် ဓလေ့ထုံးတမ်း အခန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် မိသားစု၏ ပါ၀င်မှုကို ပြသထားသည့်အတိုင်း။
လူမှုရေးမနုဿဗေဒအားဖြင့် လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သုတေသနသည် မတူညီသောအခြေအနေများတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကွဲပြားမှုများနှင့် ရှုထောင့်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း အလေးပေးပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုသည် လူနေမှုပုံစံနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ယုံကြည်ချက်များ၊ တန်ဖိုးများ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံများနှင့် ဆက်သွယ်မှု။
ယနေ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မနုဿဗေဒ၏ အရေးပါမှု
လူမှုရေး ပြောင်းလဲမှုတွေကလည်း လူသားတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံတွင် စုံလင်စွာထည့်သွင်းထားသည့် အလေ့အကျင့်အသစ်များကို သင်ယူခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေသည့် ကပ်ရောဂါ၏အခြေအနေတွင် ထင်ရှားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်မူ အပြောင်းအလဲနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကောင်းမွန်စွာ ချမှတ်ထားသော လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ နောက်ကျကျန်ခဲ့သည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံများနှင့် အခြားသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပုံကို ရိပ်မိပုံများ ပြောင်းလဲလာသည်။ ထို့ကြောင့်, မနုဿဗေဒသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသော စည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။.
တစ်ဖက်တွင်မူ လူသား၏အဖြစ်မှန်ကို ပြင်ပအခြေအနေ၌ ဘောင်ခတ်ရုံသာမက အတွင်းလောက၏ ကြွယ်ဝမှုလည်း ပါ၀င်ပါသည်။ အတွေး၊ စိတ်ခံစားမှု၊ ခံစားချက်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားတို့သည် လူ့သဘောသဘာဝ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဖော်ပြထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် နေ့စဉ်ဘဝနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်။
လူတစ်ဦးစီတွင် ထူးခြားပြီး ထပ်တလဲလဲမရနိုင်သောကြောင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အနှစ်သာရရှိသည်။ သို့သော် တစ်ဖန်၊ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အုပ်စုနှင့် အခြားလူသားများနှင့် တူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများ မျှဝေသည်။ ဟိ မနုဿဥာဏ် လူ့သဘောသဘာဝအရ မိမိကိုယ်ကို အသိပညာနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်။
ထို့ကြောင့် မတူကွဲပြားသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် ရှိရင်းစွဲ ကွဲပြားမှုကို ဖော်ပြကြသည်။ မနုဿဗေဒပညာရှင် ဖြစ်ချင်ပါသလား။ ၎င်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အလွန်အရေးကြီးသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » လေ့လာမှုများ » မနုဿဗေဒက ဘာကိုလေ့လာတာလဲ။